Thina zijwayele yokuthi isobho - kuba olunzulu, futhi elungiselela udinga ukuchitha nxenye suku. Lokhu kumane kubadumaze abanye besifazane like ukupheka, ikakhulukazi uma they sondela kusihlwa ngivela emsebenzini ngikhathele. Indlela ukupheka isobho okumnandi futhi ezisheshayo wonke umndeni? Uma esiqandisini yakho ifakwe ucishe, futhi has a bendabuko umkhiqizo isiRashiya, efana ukhukhamba, unga ngokoqobo ihora apheke hodgepodge okumnandi. Ukuze uthathe nesyroe isivinini ukupheka inyama, namasoseji - 300 g ilitha isobho ezintathu ngalinye. Ngenxa yalezi zinjongo, izinhlobo enhle ngibhema, kodwa futhi okuhle "ukuzingela izinja", ngisho izinhlobo abilisiwe - okubaluleke kakhulu, ukuthi lomkhiqizo, musa ubilise elithambile, futhi awunamatheli pan.
Okokuqala, ezinhlanu amazambane ohlanzekile amaphakathi, uthathe cubes abaphonse abilayo amanzi anosawoti ukuze ubilise imizuzu 10. Noma ubani okulungiselelwe iyiphi isidlo ayi, uyazi ukuthi ngaphambi uyifaka isobho, wena Fry it. Ngakho, isakhi esiyinhloko sibe yimichilo, kanye Skillet imizuzu 3-5 ukuletha a brown kancane yegolide amafutha sunflower. Abanye besifazane uncamela sauté ke kanye anyanisi kanye izaqathe, kodwa kule iresiphi siphakamisa ukupheka ngokwehlukile. Kanye namanoni esusa okuqukethwe okuzikhulula endaweni isobho.
Amabili naphakathi ngobukhulu Imi emapheshana ukhukhamba futhi sikadali nge inani elincane umhluzi imizuzu emine. Manje siphendukela ama big: shinkuem futhi passeruem kuze brown golden, bese ufaka ezintathu wezipuni utamatisi unama imizuzu imizuzu emihlanu. Solyanka ne isoseji izovuleka omuncu uma thina volem kuwo (emva ukhukhamba kanye anyanisi nge utamatisi unama) ingilazi ikhukhamba brine. Khona-ke kuye kudingeke ukuba banikeze thumba isobho imizuzu eyishumi.
Engeza usawoti, pepper, bay ishiya nokujikijela ezimbili nebasili omisiwe. Nakuba isoseji yethu solyanka iphekwe, thatha 100-150 amagremu leminqumo abamnyama, pitted futhi usike wabayisa tincetu (it ovunyelwe futhi isigamu). Bangeze pan ke ukuvala umlilo. Protomai ukunikeza ngaphansi lid imizuzu emithathu. Ezansi isidlo ukubeka nocezu ulamula ufafaze amakhambi oqoshiwe. Thela isobho futhi ujabulele!
Kukhona ebusika kanye nasehlobo solyanka ne isoseji. Uma eseliseduze zikhona imifino, ezifana bell pepper, amalikhi, utamatisi, oluhlaza ubhontshisi, ungakwazi ukupheka eziningi zemifino kanye uyifaka isobho. I-oda amathebhu ku-pan kanje: anyanisi lokuqala ethosiwe kuze brown golden, bese ufaka izaqathe, amasosishi pepper, kanye nezinye nemifino, ekugcineni - utamatisi. Yonke mass okungukuthi iqeda (ngokusebenzisa ukwabiwa juice kusuka utamatisi).
Umvimba Winter solyanka okulungiselelwe usebenzisa gherkins ehlukahlukene (200) futhi Capers (100 g). Kulesi kukho, ungasebenzisa ezihlukahlukene amamaki - kulapho, ngcono. Kodwa kufanele kube nezinhlobo unqambothi isoseji - ngabe yikuphi hhayi saltseson noma liverwurst. Kubonakala kuhle esikhwameni "Ulimi" kanye "Doctor". Ungakwazi ukwengeza ezinye Sturgeon ngibhema noma ezinye inyama ezifana eyosiwe inkukhu. Ngo isobho ebusika Ungase futhi aphonse iminqumo ngokulinganayo black and green. Njengoba ukuhlolwa, ungazama sisebenzise hodgepodge ezifana ne ukhilimu omuncu.
Isibindi e ukhilimu omuncu
Ukuwafaka amakhowe. Ungadliwa namathiphu
Applesauce ngaphandle kukashukela ebusika. Pamper izingane kanye nabantu abadala
Zokupheka Simple. Chadeyka Irina. iqoqo awusizo zokupheka uwayehlalise
Yini ongayinikeza ngosuku lokugubha komshado onyakeni ongu-1 ngemibhangqwana esemisha?
Mauser isibhamu. ukuguqulwa Modern izikhali edume
Njengoba iklanyelwe i-umfana zezingane futhi intombazane ndawonye: amathiphu umklami